Joe Biden oo wax ka badalaya go’aankii Trump ee Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Joe Biden oo wax ka badalaya go’aankii Trump ee Soomaaliya
Waxaa wali socda qorshe ay gadaal ka riixeyso Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka kaas oo lagu doonayo in Ciidamada dalkaas dib loogu soo celinayo Soomaaliya kadib markii uu Donald Trump, waddanka ka saaray askartii joogtay todobo bilood ka hor.
WASHINGTON, USA - Bilowgii sanadkan, Madaxweyne Trump wuxuu amrey ku dhowaad 800 oo askari oo Mareykan ah in ay ka baxaan Soomaaliya taas oo qeyb ka ah dadaal ballaaran oo maamulkiisu ku doonayay in uu xakameeyo kororka aan laga fiirsan ee ku lug lahaanshaha millatariga Mareykanka ee dagaalada aan laga adkaan karin.
In kasta oo maamulka Biden uu aqbalay qorshayaashii Trump ee ka bixitaanka Afgaanistaan, haddana warar soo baxaya ayaa sheegaya in Pentagon-ka uu durba diyaarinayo qorshe ciidamada Mareykanka loogu soo celinayo Soomaaliya.
Ku lug lahaanshaha Mareykanka ee Soomaaliya wuxuu ahaa mid aad uga yar marka loo eego duulaankii Afghanistan. Si kastaba ha noqotee, waxaa haadda jira isbadal ku yiimid Siyaasadihii hore ee Mareykanka.
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) waxaa Soomaaliya ka jooga 20 kun oo askari. Haddana, Al-Shabaab waxay si joogto ah u weeraraan xitaa bartilmaameedyada si fiican loo difaaco.
Bishii Sebtember 2019, Al-Shabaab waxay bartilmaameedsadeen saldhig millatari oo ku yaal Baledogle oo ay deganaayeen askarta Mareykan ah iyo hawlwadeennada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
5-tii Janaayo, 2020, Al-Shabaab ayaa gudaha u galay Xerada Simba ee xadka Soomaaliya la wadaagto Kenya, halkaas oo ay deganayen ugu yaraan 100 shaqaale Mareykan ah Hal askari iyo labo qandaraaslayaal ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa lagu dilay weerarka.
Saameynta ay Al-Shabaab wali ku leeyihiin Amniga Soomaaliya ayaa ku riixaya Maamulka Cusub in uu ka laabto go’aankii taliskii hore, waxaana la filayaa in arrinkaas uu go’aan rasmi ah ka soo saaro Pentagon-ka.
Sida aan hore u baahinnay, Pentagon-ka ayaa diyaarinaya hindise cusub oo la doonayo in tababarayaal ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran Mareykanka, loogu soo diro Soomaaliya si ay Ciidamada Dowladda Soomaaliya uga caawiyaan la dagaalanka kooxda gacan saarka la leh Al Qaacida ee Al-Shabaab.